Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Ny Disney Cruise Line dia mandràra ny ankizy tsy vita vaksiny
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Cruising • culinary • Kolontsaina • Entertainment • Films • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Music • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Disney Cruise Line dia mandràra ny ankizy tsy vita vaksiny.
Ny fitsipika vaovao dia ho fepetra takiana ho an'ny mpandeha amerikana sy iraisam-pirenena, manakana tsara ny ankizy avy amin'ny firenena tsy manao vaksiny zaza kely.
Ny fepetra takiana amin'ny vaksiny COVID-19 ho an'ny mpandeha nohavaozina dia nambaran'ny Disney androany.
Ny fitsipika vaovao momba ny vaksiny COVID-19 an'ny Disney Cruise Line dia hanan-kery manomboka ny 13 Janoary 2022.
Ny olona tsy mahazo vaksiny noho ny taonany dia tsy maintsy manome porofo ny valin'ny fitiliana COVID-19 miiba nalaina teo anelanelan'ny 3 andro sy 24 ora alohan'ny daty nandehanany.
Disney Cruise Line dia nanambara ny fepetra takian'ny vaksiny COVID-19 vaovao sy ny fanitarana lehibe ny fenitry ny vaksiny androany.
Raha mitanisa ny torolàlana momba ny vaksiny amerikana, izay nitarina vao haingana mba hampidirana ankizy dimy taona, Tsipika fitsangantsanganana Disney dia nilaza fa ny zaza latsaky ny dimy taona dia mila vaksiny amin'ny otrikaretina COVID-19 vao afaka miditra amin'ny sambony.
Disney, zotra fitsangatsanganana lehibe voalohany mitaky jabs ho an'ny ankizy, ary nilaza fa hihatra manomboka ny 13 Janoary 2022 ny fepetra vaovao.
"Rehefa nandeha sambo indray izahay, ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahiny, ny Cast Members ary ny Crew Member no laharam-pahamehana," hoy i Disney tamin'ny fanambarana iray. "Ny fifantohanay dia mijanona amin'ny fampandehanana ny sambonay amin'ny fomba tompon'andraikitra izay manohy mamorona majika ho an'ny rehetra ao anaty sambo."
Ny olona tsy mahazo vakisiny noho ny taonany dia tsy maintsy manome "porofon'ny valin'ny fitiliana COVID-19 miiba nalaina teo anelanelan'ny 3 andro sy 24 ora talohan'ny andro nandehanany."
Tsipika fitsangantsanganana Disney Nampitandrina fa tsy ekena ny fitiliana antigène ary tsy maintsy atao fitiliana NAAT, fitiliana PCR haingana na fitiliana PCR mifototra amin'ny laboratoara.
Ny cruise line no fizarana voalohany amin'ny orinasa Disney mitaky vaksiny ho an'ny mpanjifa. Amin'izao fotoana izao, tsy manana fepetra takian'ny vaksiny COVID-19 ho an'ny mpitsidika ny valan-javaboarin'i Disney. Na izany aza, ny mpiasa amerikana rehetra any amin'ireo toerana ireo dia tsy maintsy atao vaksiny amin'ny coronavirus.
Lasa toerana mafana COVID-19 matetika ny sambo fitsangatsanganana nandritra ny volana voalohany tamin'ny areti-mifindra coronavirus, miaraka amin'ny mpandeha sy ny mpiasa voan'ny aretina faobe ao amin'ny tontolo voafetran'ny sambo an-dranomasina.
Ny areti-mifindra dia nisy fiantraikany be tamin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana, miaraka amin'ny tsipika marobe izay tapaka noho ny fiantraikan'ny COVID-19 sy ny fameperana apetraka amin'ny dia eran'izao tontolo izao.